Dawnmanhon( ဒေါင်းမာန်ဟုန် ): October 2008
အနှစ် (၂၀) ပြည့်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (မကဒတ)။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးမှ မွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် - မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (မကဒတ) ၏ အနှစ် (၂၀) ပြည့်မြောက်အား အထူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:46 AM0comments
စွမ်းအားမြင့် မြန်မာကျောင်းသားစစ်သည်တော်များအဖွဲ့၏ သံမဏိသူရဲကောင်း (သို့) သံဃာ့အာဇာနည်အား ဂုဏ်ပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:32 AM0comments
မြန်မာ့ပြည်မှ .ဒုက္ခသည်ခလေးများအတွက် သွေးသစ်ကျောင်းကလေး..
ပန်းချီဆရာကြီး ၀သုန်၏ ဈာပနာအခမ်းအနား
.ဖနိဒါ စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 25 2008 21:39 - မြန်မာစံတော်ချိန်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 6:48 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:17 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:59 PM0comments
နိုင်ငံကျော် ပန်းချီဆရာကြီး ၀သုန်သို့
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:42 PM0comments
သမီးဖြစ်သူကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြိုးစားသူ နစက တပ်ကြပ်ကို ကျေးရွာ ရယက ဥက္ကဌက ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် သမီးဖြစ်သူကို နစက တပ်ကြပ် တဦးမှ အဓမ္မပြု ကျင့်ရန် ကြိုးစားရာမှ ဖခင်ဖြစ်သူ ရယကဥက္ကဌက ဓါးနှင့်် ခုတ်သတ်သည့် မူခင်းတခု အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ မူခင်းမှာ မောင်တောမြို့နယ် အလယ်သံကျော် ကျေးရွာအုပ်စု ကံဘုကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေသအတွင်းက ပေးပို့သောသတင်းအရ ကံဘုကျေးရွာနေ ရယကဥက္ကဌ ဦးဟာဘီစူလာမှ သမီးဖြစ်သူအား နစက တပ်ကြပ်ဇော်ဝင်းမောင်မှ အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးစားနေသည်ကို ဖခင်ဖြစ်သူ တွေ့ရာမှ အနီးမှဓါးကိုဆွဲယူပြီး နစကတပ်ကြပ်အား ဓါးဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာ ခုတ်သတ်ခဲ့သည်။
ဇော်ဝင်းမောင်မှာ မောင်တောမြို့နယ် နစက အမှတ် (၇)နယ်မြေမှဖြစ်ပြီး အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကာ ယခုအခါ မောင်တောဆေးရုံတွင် တင်ထားရကြောင်း သိရသည်။
ဦးဟာဘီစူလာမှာ အဆိုပါ အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက် တဘက်နိုင်ငံ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် လာခဲ့သည်။
ဦးဟာဘီစူလာ မိသားစုအား ယခုအခါ နစကမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
news by Niranjara
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:43 AM0comments
ဟက်ကာအကြီးစားသတိထား WHO IS THE HACKER?
အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ ဖမ်းဆီးသည့်နေ့ မှားယွင်းဖော်ပြမှု လျှောက်လဲ
တနင်္လာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 20 2008 18:02 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ စစ်အစိုးရကိုယ်စား စွဲချက်တင်သူများက အတိုက်အခံ ပါတီကြီးမှ တိုင်းအဆင့် ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထားသည့် နေ့စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်း ထွက်ဆိုထားခြင်းအတွက် တရားဆိုင်များ၏ ရှေ့နေများက ရုံးတော်သို့ လျှောက်လဲ တင်ပြထားသည်။
ထိန်းသိမ်းခံနေရသည်မှာ တနှစ်ကျော်ပင် ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ၆ ဦးအား ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု တရားရုံးတွင် ထွက်ဆိုထားခဲ့ခြင်းအပေါ် အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများက တရားရင်ဆိုင်နေသူများ နစ်နာဖွယ် ရှိသည်ဟုဆိုကာ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန် ယနေ့တွင် တရားရုံးသို့ လျှောက်လဲလိုက်ကြသည်။
“၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှာ ဖမ်းတယ်ဆိုပြီး သူတို့က လွဲလိုက်တာဟာ ချုပ်ရက်တွေအတွက် နစ်နာသွားမှာ စိုးရိမ်ရတယ်။ ဒါကြောင့် သက်သေတွေကို ထွက်ဆိုခိုင်းတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးမြင့်သွင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“တရားစွဲဆိုနေတဲ့သူတွေက အစိုးရက ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိတွေ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား တရားစွဲဆိုတာလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောစေချင်တယ်။ အခုလို အမှန်အတိုင်း သူတို့ မပြောကြတာကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက အကြည်ညိုပျက်အောင်လုပ်တာ ဖြစ်တယ်”
မန္တလေးထောင်တွင်း ချုပ်နှောင်ခံထားရသူ တရားဆိုင်နေရသူများ၏ မိသားစုဝင်များက စစ်အစိုးရကိုယ်စား စွဲချက်တင်သူများက နေ့စွဲ မှားယွင်းဖော်ပြမှုသည် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး နောင်တွင် တရားရင်ဆိုင်သူများကို နစ်နာမှု ဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုသည်။
တရားရင်ဆိုင်နေသူ တဦးဖြစ်သည့် မန္တလေး အန်အယ်လ်ဒီ စည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြမြကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက ဖမ်းဆီးထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူမ၏ အကိုရင်းဖြစ်သူ ဦးဘစိုးနှင့် ညီမ ဒေါ်တင်ဝင်းရီတို့က သက်သေ အထောက်အထားများနှင့် ရုံးတော်သို့ တင်ပြခဲ့သေးသည်။
“တနှစ်အတွင်းမှာ ထောင်ဝင်စာတွေ့ခဲ့တာ ၂၄ ကြိမ်ဆိုတော့ ဒေါ်ဝင်းမြမြကို ဖမ်းတာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မဟုတ်ဘဲ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်အောင် စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ အထောက်အထားတွေနဲ့ ရုံးတော်ကို သက်သေတွေ ပြခဲ့တယ်” ဟု ဦးဘစိုးက ပြောသည်။
ယခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က တရားရုံးတွင် စွဲချက်တင်ရာ၌ အစိုးရ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိများက ဒေါ်ဝင်းမြမြနှင့် မန္တလေးတိုင်း အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၅ ဦးအား ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးသည်ဟု တရားရုံး၌ ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
ယခုအမှုသည် အထူးခုံရုံးဟု ဆိုသော်လည်း အရပ်ဘက်ခုံရုံး ဖြစ်သဖြင့် ချုပ်ရက်များကို လျှော့ရက်ထဲတွင် ထည့်သွင်း ရေတွက်ခွင့်၊ ခံစားခွင့် ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေ ဦးမြသွင်က ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်း အဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ ဒေါ်ဝင်းမြမြ (မန္တလေးတိုင်းစည်း အဖွဲ့ဝင်)၊ ဦးကံထွန်း (မန္တလေးတိုင်းစည်း အဖွဲ့ဝင်)နှင့် ဦးသန်းလွင် (မတ္တရာလွှတ်တော်အမတ်) အား အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေရန် ပြောဆိုမှု - ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ပုဒ်မ လူတဦးနှင့်တဦး၊ တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ကို မလိုမုန်းထားဖြစ်စေရန် မသမာသည့်စိတ်ဖြင့် မရိုးမဖြောင့် လုပ်ဆောင်မှု - ၁၅၃ (က) တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
ကျန်ရှိသည့် မိုးကုတ်မြို့နယ်စည်း ကိုမင်းသူ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့စည်း ကိုတင်ရွှေ၊ မတ္တီလာမြို့နယ်စည်း (လူငယ်) ကိုတင်ကိုကို အား ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ၁၅၃ (က)၊ ဘာသာသာသနာအား အကြည်ညိုပျက်စေရန် လုပ်ဆောင်မှု - ပုဒ်မ ၁၉၅ (က)၊ တားဖြစ်မိန့်ထုတ်ထားသည်ကို သိလျက်နှင့် ပါဝင်မှု - ပုဒ်မ ၁၄၅၊ လူစုလူဝေးတွင် ပါဝင်ကာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်စေမှု - ပုဒ်မ ၁၄၇၊ ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် အစုအဝေးတွင် ပါဝင်မှု - ပုဒ်မ ၁၅၂ တို့ဖြင့် စွဲချက် တင်ထားသည်။
လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အမှုကို စီရင်ချက်ချမည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ဘောလုံးကွင်းတခုအနီးတွင် အသေးစား ဗုံးတလုံး ပေါက်ကွဲ
ပုံကို မနှိပ်ပါနှင့် ပေါက်ကွဲတတ်ပါသည်။
YANGON - A small bomb exploded nearafootball field in northeast Yangon late Saturday,aMyanmar police official said, causing minor damage but no injuries.
"No one was hurt or killed in the bomb blast," saidapolice official who did not want to be named as he was not authorised to talk to the media.
The blast hit at about 8:00 pm (1330 GMT), and police immediately sealed off the area, an AFP correspondent on the scene said.
Saturday's incident follows four blasts last month, one of which killed two people and wounded 10 atavideo cafe also northeast of Yangon.
Myanmar's ruling military has in the past blamed similar explosions on armed exile groups or ethnic rebels who have been battling the military rulers for decades.
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:16 PM0comments
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ (၄၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ
စင်္ကာပူမှာဆေးကုသခွင့်ငြင်းပယ်ခံလိုက်ရတဲ့၊ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်၊ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ။
မြန်မာစစ်ဆရာဝန်တွေကိုအယုံအကြည်မရှိဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ အူကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေဟာစင်္ကာပူနိုင်ငံမှာဆေးရုံတက်ကုသရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆေးရုံတက်စဉ် သူနေထိုင်မဲ့အခန်းရှိအထပ်တခုလုံးအား စင်္ကာပူမှလုံခြုံရေး တာဝန်ယူ ပေးရန်နှင့်စင်္ကာပူအစိုးရ၏ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပေးရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှစင်္ကာပူအစိုးရထံ တင်ပြတောင်းခံခဲ့ကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ ဒီလိုတောင်းဆိုချက်တွေထဲက စင်္ကာပူအစိုးရဘက်ကသည်းမခံနိုင် တဲ့တောင်းဆိုချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းမှုကို ဆေးရုံမှအာမခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဘဲ။ဒီလိုမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုသည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့ စင်္ကာပူတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ “ဒီလိုရောဂါမျိုးဟာစင်္ကာပူထက်UKနိုင်ငံမှာ ကုသတာဟာပိုမိုသင့်လျှော်ပြီး အာမခံချက်ပိုရှိလို့အဲဒီကိုဘဲသွားရန်အကြံပြုပါ တယ်။“ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ငြင်းပယ်ခံရတာကြောင့်စင်္ကာပူခရီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာလို့နေပြည် တော်စစ်ရုံးချုပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှသတင်းများထွက်ပေါ်လျှက်ရှိပါတယ်။
HOSPITAL ADMISSION WAS REFUSED FOR SR.GEN.THAN SHWEIN SINGAPORE.It was arranged to get medical treatment in Singapore for Sr.Gen.Than Shwe intestine cancer as Burmese Military doctors were not trusted. So many demands for security arrangement were asked by Burmese Authority that responsible party in Singapore finally frustrated. Sr.Gen.Than Shwe tries to persuade Singapore Government to invite him for State visit through Ministry of Foreign Affair but turn down by Singapore Government. One more shameful thing is that Sr.Gen.Than Shwe team ask for recovering guarantee from Singapore hospital and finally Singapore side advise them to get better and sure treatment in UK. It isarelief for Singapore hospital that they can finally sort out the problem by stupidity of patient own fault. Sr.Gen.Than Shwe medical treatment is presently postpone as they found nowhere to go. All was learnt from Sr.Gen.Than Shwe’s inner circle grapevine.(It was said among them in Nay-Pyi-Taw inner circle that Sr.Gen.Than Shwe is seeking for another suitable country to accept him and give himamedical treatment. Probably China, Thailand or any other if not accepted in Singapore.)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:25 PM0comments
8888 ပြည်သူ့ သတင်းစဉ်
PDF file ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:43 PM0comments
ပြည်တွင်း လူငယ်များ၏ အခြေနေမှန် အားတင် ပြ လိုက် သည်
ပြီးခဲ့ သည် ရက် ပိုင်းများက မီဒီယာ များတွင် ပါရှိလာ သော လူငယ်များ ၏ နုတ်ထွက်ကြောင်း လက် မှတ်ထိုးကြသည် လူငယ် အများစု သည် ပါတီ ပြင်ပ မှလူငယ်များဖြစ် ကြပြီး ပါတီတွင် တရားဝင် အသင်း ၀င် ထားသူများမဟုတ်ကြပါ ။ အချို့ သော မြို့နယ်များရှိ ပါတီဝင် လူငယ် များသည် ထိုသူတို့ကိုယ်တိုင် ပင် မသိ ရှိလိုက် ပဲ နုတ်ထွက် သည့်အထဲ တွင် ပါ ၀င် နေသည် ကို တွေ့ရပါသည် ။ ထိုကဲ့ သို မိမိဆန္ဒ သဘော ထား မပါ ပဲ နုတ်ထွက် သည့်အထဲတွင် ပါဝင်နေသော လူငယ်များသည် အချိန်မှီ ဖြေရှင်း နိုင်ရန်ဆောင်ရွက် နေပြီ ဖြစ် ပါသည် ။ အမှန်တကယ် နုတ်ထွက် သည့်လူငယ်များမှ ခန်မှန်းခြေ အားဖြင့်( ၁၅ ) ယောက် ၀န်းကျင် သာရှိပါသည် ။ ကျန်သည့်လူငယ် များမှာ ယခု ကိစ္စ ကို ဦးဆောင် နေသူများ၏ တဖက်လှည့်ဖြင့် သွေး ဆောင် သိမ်းသွင်း ခြင်းခံ လိုက် ကြရသော လူငယ် များဖြစ်ပါသည် ။ မီဒီယာများတွင် ပါရှိလာသည့်လူငယ်( ၁၀၀ ) ကျော် နုတ်ထွက် သည် ဆိုသော်လည်းပဲ အမှန်တကယ် လူငယ်ပါတီ ၀င် များမဟုတ်သည် အတွက် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု များအနေဖြင့်အဆိုပါကိစ္စအား စိုးရိမ်ကြောင့် ကြ နေရန် မလိုပါကြောင်း အသိ ပေး လိုက် ရပါသည် ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ မိသားစုဝင်များတရားခွင်၌ ၀င်ရောက်ကြားနာခွင့်တောင်းဆို
ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာလူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့၊တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ။ ။ AFP
ယနေ့ နံနက် ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ရန်ကုန်သီရိမင်္ဂလာဈေး - တိုက်ကြီး အဝေးပြေး ဟိုင်းလတ်စ်ကားတစီး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး လူ ၇ ဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကာ လူ ၁ ဦး အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်။ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ဈေးသက်သာတဲ့ဂက်စ်ကို လောင်စာဆီအစား အသုံးပြုလို့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရတာလို့အမည်မဖေါ်လိုတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်အနီးမှာ ဖြစ်ပွားတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ရန်ကုန်တွင်ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားများကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးယာဉ်အဖြစ် ပြောင်းလဲလျှက်ရှိရာ ယခင်ကလည်း ဂတ်စ်အိုး ပေါက်ကွဲမှုများ ရှိခဲ့ဖူးသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:29 PM0comments
ပြည်တွင်း က အမည်မသိလူငယ်များရဲ့ သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပေးပို့သူ ။ ။ oakaraphyu
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:49 AM0comments
Post from sainnatkha.blogspot.com
ဖုန်းနံပါတ်သိလျှင် အိမ်လိပ်စာသိအောင်လုပ်တဲ့ Web Site တခုတင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီ Web Site လေးကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း မှပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Name (or)Phone နေရာတွင် မိမိသိလိုသောဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါက ဖုန်းပိုင်ရှင်နာမည် နှင့်တကွ လိပ်စာပါတွေရပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးသောဖုန်းနံပါတ်များပါဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေရာမှ Click နှိပ်ပြီးသွားပါ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:18 AM0comments
GW အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လူငယ်၈ဦးဖမ်းဆီးခံရ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:21 PM0comments
မြန်မာပညာရှင်များ၏ နံမည်ကို နှိပ်၍ personal detaအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရူနိုင်ပါသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 5:26 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:38 PM0comments